Ukwakhiwa pigsty ngamagoli angu-100 noma 50
Breeding izingulube - ibhizinisi inzuzo eyanele, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi enzima. Umlimi, phakathi kokunye, kufanele kubhekwe kanye nokwakhiwa yokusebenzisa izinkundla ezifanelekayo ukuze izilwane. Ezimweni eziningi, ekuqaleni amabhizinisi qala-up ukuthola akukho kuka 50-100 amakhanda ezingulubeni. Yakha pigsty awulukhuni izilwane eziningi kangaka. Izindleko zokuhlinzeka ukwakhiwa ngesikhathi esifanayo ekukhokheleni ngokwabo angabacwasi ngokushesha.
Lapho ukwakha pigsty?
Ngokusho mithetho, ukwakhiwa pigsties bavunyelwe akukho eduze kuka-15 metres kusukela izakhiwo zokuhlala. Kodwa kangcono Yiqiniso, ukwakha lesi sakhiwo nakakhulu. Phela, iphunga a pigsty, ngisho scrubbed njalo, kungaba namandla khulu. Ngaphezu kwalokho, lapho ekhetha indawo ukwakha ezifana injongo kufanele bacabangele futhi lezi zinto ezilandelayo:
Pigsty kumele itholakale entabeni.
Akunakwenzeka ukwakha izikhungo ezinjengalezi eduze imizimba amanzi.
By piggery ukuba sezitholakala kalula.
Yiqiniso, ukwakha isakhiwo esinjalo kufanele kube kuhlanganise eduze nezintambo zikagesi. Futhi eduze pigsty kumele kube nendawo eyanele ukufakwa ithangi ukonakala ngenxa umquba kanye imishini imithombo amanzi.
Ukwakhiwa pigsties kumele kwenziwe nge nokubhalwa ukuthethwa kwecala. Ekubhaleni leli phepha ukuze bangabhekani kufanele kuqala acabangele izici okuqukethwe kwalesi lwesimila zemfuyo. Uma umlimi kudinga izingulube sikhule, hhayi kuphela ngoba inyama kodwa futhi ngenjongo ukudayiswa abakhiqizi purebred, ukwakhiwa kuyodingeka ihlukaniswe izingxenye ezimbili - zizalela kanye fattening. Endaweni yokuqala kubalulekile ukuba azihlelele matings nabesifazane nge amachwane. Emkhakheni imishini fattening ezifakiwe isilwane futhi inyoni esebenza ngogesi.
Ngaphezu kwezibaya futhi zizalela izindawo kuleli pigsty futhi kufanele ifakwe:
Emafektri for yokusungula kanye feed.
Platform ngesizathu enesisindo izilwane.
Machines izingulube kufanele kube ngokwanele ezinkulu. Okungcono kakhulu, uma omunye isilwane sibe mayelana 2.5 m2 isikhala. Banikezwe amavesi futhi ibhizinisi emagcekeni abalimi ngokuvamile wayekwenza ukwakhiwa pigsty nezinhloko 100 tikwele hhayi ngaphansi kuka-300. Ukuze amachwane 50 kumanele cishe 200 m 2.
Izingulube kuthiwa ngokwesiko kubhekwe ukuba izilwane engahlanzekile kakhulu. Nokho, ngokuya kuba eduke. Izingulube, njengabanye imfuyo, kungcono ukuhlala endaweni ehlanzekile futhi yomile. Ngisho izingulube azikhulula ukuhamba njalo endaweni efanayo. Kunoma ikuphi, umshini kufanele inikezwe: endaweni ukusuthisa, endaweni den i sokuzikhulula.
Ukwakhiwa pigsties ngumnikazi izandla: yini okufanele odongeni
Yiqiniso, ekulungiseleleni iphrojekthi kufanele bavezwe kanye nalokho izinto izosetshenziselwa ukwakhiwa. Pigsty izindonga lingakhiwa, isibonelo, abenziwe ngokhuni noma isitini. Kodwa izakhiwo ngokuvamile ezinjalo zisekhona eyakhelwe emabhuloki. Uma usebenzisa lolu hlobo of impahla ungathola ukwakhiwa kakhulu isikhathi eside nokuyingozi hhayi eqolo.
Esakhiwe emabhuloki pigsty efiselekayo okwengeziwe vimbela amaminerali yoboya noma polystyrene ukunwetshwa. Njengoba eshibhile isikhumba yangaphandle ukusebenzisa steel ishidi.
Ukuze pigsty wakhonza isikhathi eside Yiqiniso, kufanele wenze isisekelo esiqinile ngaphansi kwaso. Ukukhetha uhlobo isisekelo kusakhiwa, kanye ngaphansi kwanoma yisiphi esinye kuncike ngokuyinhloko izici umhlabathi ngalesi indawo ethile. Ngokuvamile, ukwakhiwa ngepeni uphokophele 50 futhi kuhilela ethela isisekelo ngesimo esinamandla kwagcizelela strip ukhonkolo. Ngezinye izikhathi, lapho izindawo ezinjalo sokuxazulula pier isisekelo njengoba simuke namanzi.
Uphahla phezu izakhiwo lokhu lunye ngokuvamile aneliseke elachitheka. pigsties Ukwakhiwa - kuba impela eqolo. Kodwa ungagcina kancane uma ufuna ngokukhetha i isakhiwo esinjalo, akuyona ezithakazelisayo kakhulu, kodwa izinto okunokwethenjelwa ngempela. Uma odongeni kungcono ukusebenzisa eziphansi amayunithi ukuze ulwelwesi kophahla - slate. Kungenzeka futhi ukunamathisela phezu kophahla futhi material ukufulela. Kodwa noma kunjalo, njengoba izindonga, ophahleni pigsty kufanele nakanjani efudumele.
Yikuphi okubalulekile likhethelwe phansi?
izingulube Cold baphathe akukuhle kakhulu. Ngakho-ke ezitebeleni ezincane ezimbalwa amakhanda ngokuvamile asathuthuka efudumele izinkuni phansi. Nokho, ngeshwa, ezakhiweni ne endaweni enkulu futhi yakhelwe wokugcinwa inabantu abaningi, le ndlela asifanele. Iqiniso lokuthi nezingulube ziyethusa uthande ukuhlafuna zokhuni. Ngakho ngo pigsties ngokwabo ngokuvamile ngempela kumanzi ngenxa okuyinto amaqabunga amabhodi othambile. Futhi lokhu, esikhundleni salokho, kusiza kakhulu umsebenzi izilwane ku nokubhujiswa kwabo.
Ngakho-ke, ezitebeleni ezinkulu, eyenzelwe 50-100 ikhanda, phansi ngokuvamile wathela phezu kwesihlabathi nge usimende nosimende (nge ukuqinisa). Kodwa kusukela impahla kubanda futhi emgodini kusondela phezu ukhonkolo ngaphezu kwalokho ngempela embondelene amabhodi sokhuni. izingulube yabo, yebo, kungaba futhi elimazayo. Kodwa kuba esikhundleni ishibhile ukulungiswa phansi ngokuphelele. Empeleni uqobo ukhonkolo imishini enamathela kumele ligcwaliswe nge emthambekeni okungenani 5 degrees ngase yezinto.
Stables for izingulube kufanele kube hhayi kuphela ihlanzekile futhi yomile, kodwa ukukhanya okwanele. Usayizi elikhulu amafasitela ezakhiweni -. M 1h1.5 glazing Ngakho pigsty kumele kube kabili. Kungenjalo umlimi ebusika kwakuyodingeka uchitha kangakanani ku bafudumale. Positioning iwindi endaweni pigsty kumele okungenani engamamitha 1.2-1.5 m kusuka ezingeni phansi.
Izici yelungiselelo we ukupholisa
Ukwakhiwa cowsheds, piggeries nezinkukhu izindlu endaweni enkulu - ke kunalokho nzima futhi ngenxa izakhiwo ezinjalo udinga ukuhlomisa kahle. Ngakho, ngokwesibonelo, isici begazi izingulube ngukutsi secrete lapho fattening igesi eningi. Kodwa ukudluliswa akukuhle kakhulu ngesikhathi ngokwakho umoya ongcolile. Ngaphansi kwezimo ezinjalo kunalokho izingulube isisindo futhi begula kaningi. Ngakho-ke, lapho ezilandelwayo iphrojekthi pigsty kufanele ucabangele kuhlanganise kudivayisi ukupholisa.
Ikamelo, okuyinto ihlalisa imigomo 100 azungezwe ophahleni kwezimayini ivame ukwenza 5 cm ububanzi 60x60 Amapayipi ne okukhipha ophahleni -. Ngo igebe emoyeni. Ezinconyiwe ubukhulu hose izinhlelo ezinjalo -. 20x10 cm pigsty ngo-50 amakhanda air-supply imiphini ungakwazi Yiqiniso, ukwenza kancane.
Uma izinga lokushisa komoya ebusika esikhundleni ngepeni indawo lehla ngezansi -25 C, ababhemayo ngempela kufanele ahlinzeke Ukushisa owengeziwe. Ukuze wenze kanjalo kungaba ukuhlomisa isibilisi. Kepha wiring, the pigsty kungenziwa ifakwe ezivamile eziphansi owodwa ipayipi uhlelo nge kwegazi zemvelo.
Ukwakhiwa pigsties, elula futhi iqine, idinga ngcono futhi lokhu ezihlukahlukene zobunjiniyela (ukuchelela izilwane wokuhlanza nge hose). inethiwekhi eyodwa eduze kwamabhilidi, ngeshwa, awavamile. Ngakho-ke, ngokuvamile kahle is yamba ukuhlinzeka ngamanzi. Ngezinye izikhathi, basuke anemisila eziningana. Yiqiniso, amanzi ashisayo in a pigsty akusho ukuthi ukuhlomisa. Umkhuhlane kwakwanele.
Ukwakhiwa kwehlelo amakhanda 50 umquba angasuswa ngesandla. Ngo isakhiwo esifanayo, eyenzelwe 100 izingulube, kangcono setha abathutha ethize - nokususa kanye olwehlelayo. Ngosizo lwabo, umquba kungenziwa eza ngqo trailer ugandaganda. Ipulazi imfucuza zingagcinwa in emgodini omkhulu. Kodwa kungcono ukuhlomisa pigsty eduze ethangini ukonakala bacterium.
Kusukela lokho ezinye izinto lingakhiwa?
Muva nje, emhlanganweni izakhiwo lokhu lunye avame ukusetshenziswa futhi ubuchwepheshe obehlukene yesimanje. Ngokwesibonelo, pigsties wayekwenza ukwakhiwa metal izakhiwo. Buildings zalolu hlobo, ngaphezu izindleko hhayi kakhulu, futhi izinzuzo ngisho ezifana:
ukusatshalaliswa elula isikhala elingaphakathi.
ukuphila isikhathi eside.
Ngaphandle yini enye futhi ayakhokhela piggeries ensimbi esikhundleni ngokushesha.
Yiqiniso, ukwakha piggery enkulu ngoba amakhanda 50 noma 100 ke ngezandla zakhe kunzima ngempela. Kunoma ikuphi, umuntu oyedwa nale nkinga, yebo, akakwazi ukubhekana. Ngakho-ke, abalimi ngokuvamile kakhulu ekuqaleni uncamela ukuqasha ochwepheshe namanje futhi wayala ukuba kwakhiwe pigsties turnkey. Ukuchitha imali kuleli cala, yebo, kube ukuthi unomuzwa kodwa empeleni ngu yokuzalanisa izilwane kuyoba ngokushesha okungaka. Futhi kakade emakamelweni ngokugcwele elihlomile.
Yiqiniso, lapho ukhetha inkampani wahlanganyela emsebenzini onjengalo, kufanele kuqala ukuqinisekisa ukuthi isesimweni esihle. Ukuthembela iyiphi inkampani into ezifana ukwakhiwa pigsties, ukubuyekezwa wakhe kuyi-Internet, qiniseka ukuthi pre-funda. Ngokwesibonelo, abalimi baye bakha umbono omuhle izinkampani ezifana "AgroProm Design" futhi "RosAgroStroy".
Indlela ukugcina isikhwebu sommbila? ufunde
Nitrate nezithelo, ungabheka umhloli
Ngubani umlimi? Farming
Lo mbukiso lokuqala wezolimo eRussia kubani futhi lapho uhlelekile futhi kwenziwe?
Amahholo Kiev nezici zabo
I-Atrophic gastritis, izimpawu kanye ne-pathophysiology.
Biography: Cosmonaut Nikolaev Andrian Grigorevich
Isikhumulo sezindiza "Ataturk": emoyeni esangweni Turkey
Ukuhlobisa ekhishini ngezandla zakhe: isithombe kanye imibono umhlabeleli
Generator 100 kW udizili: incazelo, Ukucaciswa nezilinganiso
Inkontileka Real komthetho wamaRoma
Ungayifaka kanjani isikhwama esenziwe ngama-raber bands? Amasu ayisisekelo wokubamba
Isakhamuzi saseFrance: amathemba kanye nezinzuzo zepaspoti ye-EU